Tax Archives - Business Centric Network (BCN)
? ? ? သငျသိပွီးပွီလား Personal Income Tax (PIT) လစာဝငျငှခှေနျဆောငျရမညျ့ ရကျကြျောသှားရငျ ဒဏျကွေး ရှိတယျဆိုတာ ? ? ?
February 7, 2020 February 25, 2020 San Thida
? ? ? သငျသိပွီးပွီလား Personal Income Tax (PIT) လစာဝငျငှခှေနျဆောငျရမညျ့ ရကျကြျောသှားရငျ ဒဏျကွေး ရှိတယျဆိုတာ ? ? ? ✅ Personal Income Tax (PIT) လစာဝငျငှခှေနျ ဆိုတာ တဈနှဈ ပမျြးမြှ လစာ ? ? (၄၈) သိနျးနှငျ့အထကျဝငျငှရှေိသူတိုငျးဝငျငှခှေနျဆောငျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ✅ သကျဆိုငျရာလုပျငနျးမှ တာဝနျရှိသူမှ ဝနျထမျးအားလစာပေးခြိနျတှငျ လစာမှ နုတျယူပွီးသကျဆိုငျရာအခှနျရုံးသို့ လစဉျ (၇) ရကျနထေ့ကျ နောကျမကပြဲ ပေးသှငျးရပါမယျ။ ✅ ပေးသှငျးရနျ ပကျြကှကျပါက ကသြငျ့ အခှနျ၏ (၁၀) ရာခိုငျနှုနျးကို ဒဏျငှအေဖွဈပေးဆောငျရပါမညျ။ ??သငျ့မအားလပျလို့ လစဉျ အခှနျဆောငျဖို့ အခြိနျမပေးနိုငျဘူး ဆိုရငျ BCN မှ… Continue reading ? ? ? သငျသိပွီးပွီလား Personal Income Tax (PIT) လစာဝငျငှခှေနျဆောငျရမညျ့ ရကျကြျောသှားရငျ ဒဏျကွေး ရှိတယျဆိုတာ ? ? ?
Tagged Income Tax, SSBLeaveacomment
အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အရေးများ ( Taxpayer’s Rights) ကင်းလွတ်ခွင့်Exemption အခှနျထမျး၏အခှငျ့အရေးမြား ( Taxpayer’s Rights) ကငျးလှတျခှငျ့Exemption
June 11, 2018 June 9, 2018 San Thida
အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အရေးများ ( Taxpayer’s Rights) ကင်းလွတ်ခွင့်Exemption - ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့်အကျုံးဝင်သည့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ကျောင်းဆရာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင်၊ သဘင်ပညာသည်၊ တေးရေး၊ အဆိုတော်၊ ပန်းချီဆရာ၊ ပန်းပုဆရာများ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။(၂၀၁၇ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဃ )) ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် - အထူးကုန်စည် ၅ မျိုးမှအပ ကျန်အထူးကုန်စည်များပြည်ပတင်ပို့လျှင် အထူးကုန်စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။ - အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့်ဆေးရွက်ကြီး၊ဆေးပေါ့လိပ်နှင့်ဆေးပြင်းလိပ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းရငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ ထက်မပိုလျှင် အထူးကုန် စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။(၂၀၁၇ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂) - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းရငွေ၊ ကုန်သွယ်မှုရငွေနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုရငွေ သည်တစ်နှစ်အတွင်း… Continue reading အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အရေးများ ( Taxpayer’s Rights) ကင်းလွတ်ခွင့်Exemption အခှနျထမျး၏အခှငျ့အရေးမြား ( Taxpayer’s Rights) ကငျးလှတျခှငျ့Exemption
Tax Knowledge (2)
June 11, 2018 June 8, 2018 San Thida
လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ကျသင့်အခွန်ကို နုတ်ယူပြီး ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာပတခ (ဝင)-၁၅ဖြစ်ပါသည်။ - လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ(ဝင)-၁၆ကိုမူ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်တို့က တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ - နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာနဖြစ်လျှင် ဆိုင်ရာရုံး၏အကြီးအကဲ။ - တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ယင်းလုပ်ငန်း၏ ပိုင်ရှင်။ - ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြစ်လျှင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်စု၏အုပ်ချုပ်မှုကို တာဝန်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်။ - သမဝါယမအသင်းဖြစ်လျှင် ယင်းအသင်း၏ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး။ *** လစာငှထေုတျပေးရနျ တာဝနျရှိသူသညျ ထိုလစာငှထေုတျပေးခြိနျ၌ ကသြငျ့အခှနျကို နုတျယူပွီး ပေးသှငျးရမညျ။ လစဉျပေးသှငျးရမညျ့ပုံစံမှာပတခ (ဝင)-၁၅ဖွဈပါသညျ။ - လစာနှဈခြုပျစာရငျးပုံစံ ပတခ(ဝင)-၁၆ကိုမူ ဝငျငှနှေဈကုနျဆုံးပွီး သုံးလအတှငျး အောကျဖျောပွပါပုဂ်ဂိုလျတို့က တငျသှငျးရမညျ ဖွဈပါသညျ။ - နိုငျငံပိုငျစီးပှားရေးအဖှဲ့အစညျး၊နိုငျငံပိုငျစကျရုံ၊ အလုပျရုံ၊… Continue reading Tax Knowledge (2)
May 25, 2018 February 7, 2020 San Thida
လစာ ရငွေကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတဲ့ ၄၈ သိန်း နဲ့ အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရငွေ အဖြစ် စာရင်းခွဲဖော်ပြ အခွန်ထမ်းဆောင်ရင် အခွန်ကင်းလွတ်သက်သာနိုင်သလား မေးခွန်းအပေါ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မဖြစ်နိုင် မလုပ်သင့်ကြောင်း သူငယ်ချင်းရဲ့အမေးကို ဖြေကြားချက် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ မေးလာတာနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ အမြန် ပြန်ဖြေခဲ့တာကို တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အစိုးရ ဘဏ္ဍာငွေရရှိဖို့ ဆိုတာ ၃လမ်းဘဲရှိတာ၊ အဲသည် ၃လမ်းမှာ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာ တင်ပြခဲ့ဖူးပြီးမို့ ပြန်မရှင်းတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်စေ့ချင်ရင် အခွန်ကိုဘယ်လို လိမ်(လစာရတဲ့ငွေကို အခြားငွေလို့ ဘယ်လိုအထောက်အထားပြပြ လိမ်တာပါဘဲ) ရှောင်မလဲလို့ မတွေးသင့် မလုပ်သင့် မစဉ်းစားသင့် တာမို့ အမြန်ပြန်ဖြေခဲ့တာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ လစာနဲ့ ပညာ စီးပွား အခြား ငွေ၃ရပ်ကို သီးခြားစည်းကြပ်မယ်၊… Continue reading Tax Knowledge
အခွန်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ အခှနျဆိုငျရာ မေးခှနျးနှငျ့ အဖွမြေား